Iskuulka iyo fashilka waalidiinta Soomaalida | Somaliska
Horumarka ay ardadu ka gaaraan waxbarashada iskuulada Sweden waxaa qeyb weyn ka qaata waalidiinta, oo caruurtooda ka caawiya casharada iyo la socodka iskuulka. Doorka waalidiinta ayaa ah mid si weyn uga duwan kii Somalia. Marka la joogo Somalia ayaa waalidiintu aysan sidaa isugu hawli iskuulka maadaama macalimiinta Somalia ay yihiin waalidka labaad ee ardada.
Maadaama uu hooseeyo heerka waxbarashada ee qaar badan oo ka mid ah waaliidinta Soomaalida, isla markaana ay dhibaato ka haysato luuqada ayaa taasi waxay keentay in caruurta Soomaalidu ay dhibaato kala soo daristo iskuulka. Dhibaatada kala haysata waalidiinta Soomaalida iyo iskuulada Sweden ayaa ah mid aan wax badan laga qorin balse qeyb weyn ka ah sababta aysan ardada Soomaalidu u dhamaysan iskuulada. Xaalada ayaa maraysa in xitaa waalidiinta iyo caruurtu aysan isku luuqad ku halin.
Xalka arintaan ayaa noqon kara sida magaalooyinka qaar laga sameeyay in jaaliyadaha Soomaalida ay caruurta ka caawiyaan casharada balse taasi ma buuxinayso booska waalidka oo laga doonayo in uu si buuxda ula socdo caruurtooda iyo hawsha iskuulka. Xitaa haddii uusan waalidku ahayn mid waxbarasho leh ama aan luuqada ku hadli karin, wali waxaa muhiim ah in waalidku uu xiiso u muujiyo waxbarashada caruurtisa iyo halka ay wax marayaan.
Haddii la doonayo in caruurta Soomaalidu ay horumar ka gaaraan iskuulada isla markaana uu guud ahaan kor u kaco magaca Soomaalida, waxaa loo baahanyahay in xooga la saaro sidii taageero buuxda loo siin lahaa caruurta iyo waalidka.
Dadka dagan wadankaan wey ogyihiin in iskuulada Iswiidhan ay yihiiin sida goob loo soo damaashad tago.Waaalidka in uu ilmahiisa caawiyo wey fiicantahay laaakin meeshan waxbarasho kama jirto!!!!!
Waxa dhiibato aan la’qarin karin ah.
Ardayga haduu aana dagaal badneen oo maskiin yahay, macalamiinta wee amaanan ardayga oo walidka Somaliga marka ee isla fadhiyan waxa ee siyaan dhibac yar ah, xogta dhabta ah. Aniga waxan ahay arday waana soomaray dhibaatada kor kuxusan.
Ubadki ayaa qaadanayo roolki waalidka ahaa, ayago wayi arag aheen balse waxa bulshada ku argeeyn bee soo kalinayan Qooska dhaxdooda. Qilaafadka aloolsamo inta badan waalidka wuu ku fashilma hadeeysan aheen waalid mideysan Mabaadi ”Ahludiin” ama ”Aqoonyaho” oo fadhiit ah balse waayi arag ah.
asc wbr wbr marka aadbaan idiin salaamayaa, tankale anigu waxaan dhihi lahaa waalidiinta koley dhib weyn ayaa heysata oo ilaahay haka dulqaado laakiin hadii ay xitaa waalidiinta aqoon ayeynan lahyn waa iney caruurta umuujiyaan xiiso gelin dhanka wax barashada ah waayo hidi, diilo iney galiyaan rajo ayaa loo baahan yahay ilaahayna ha udhib yareeyo wxa barashada intii islaam ah aamiin wsc wbr